ဟိုတယ်ပရိဘောဂအိတ်ကပ်နွေ ဦး မွေ့ရာဆိုဖာအိပ်ရာ – Baotian ပရိဘောဂကုမ္ပဏီ, Ltd.
ဟိုတယ်ပရိဘောဂခေတ်သစ်စတိုင်ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောင်းပြန်ထိုင်ခုံကူရှင်များဆိုဖာအိပ်ရာ 500 အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်. Square piping series ယန္တရားသည်မတူညီသောဟိုတယ်များနှင့်မိသားစုများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အထောက်အပံ့ကိုပေးသည်. စံအိတ်ဆောင်နွေ ဦး ရာသီမွေ့ယာအရွယ်အစား: 90/130*185*12စင်တီမီတာ.
အမျိုးအစား: Room ည့်ခန်းသုံးဆိုဖာပရိဘောဂ; ဟိုတယ် Suite; ဟိုတယ်အခန်း;အိပ်ခန်းပရိဘောဂ
ပစ္စည်း: အထည်; သစ်သားခြေထောက်(အညိုေရာင်ရင့်); အစိုင်အခဲသစ်သား&အထပ်သား; ရေမြှုပ်,သတ္တုယန္တရား
ထုတ်ကုန်အမည်: ဆိုဖာအိပ်ယာ; ဆိုဖာ cum အိပ်ရာ; နှစ်ဆဆိုဖာအိပ်ရာ;အိပ်ရာထဲကထွက်ခေါက်
function ကို: ဆိုဖာအိပ်ယာ
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): 130L*90W*85H; 180L*90W*85H; စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
အလေးချိန်: 72ဒေါ်လာ; 93ဒေါ်လာ